Hanamarika kihon-dalana ve ny taona 2022 amin'ny didy aman-dalàna na ny fandrarana ny trawling ambany? - Blue Ventures
“Mitombo ny isan'ny feo miantso ny hampitsaharana ilay voalaza fa 'teknika fanjonoana ratsy indrindra eran-tany', dia ny trawling ambany. Mitaky ny hisian’ny fanovana lalina amin’ity sehatra ity ihany koa izy ireo, na dia eo amin’ny ampahefatry ny trondro lanin’izao tontolo izao aza no tratra amin’izany fomba izany, izay miteraka fahasimbana goavana amin’ny fanambanin’ny ranomasina.
“Ny tsatòka ara-toekarena dia ampahany amin'ny tsy fahampian'ny fandrosoana amin'ny fanaraha-maso ny fomba fanao. Mba hitadiavana vahaolana, ny Transform Bottom Trawling Coalition, izay mampivondrona ireo mpanjono madinika, orinasa hazan-dranomasina, mpiaro ny tontolo iainana ary mpahay siansa, dia nanao antso efatra ho amin'ny hetsika mba hanandrana hamerana ny fiantraikany ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy amin'ny trawling ambany.
Miantso ny firenena amoron-tsiraka rehetra ny fiaraha-mitantana mba hanangana, hanitarana ary hanamafy ny faritra an-dranomasina (IEZs), izay voarara ny fanondranana an-tsokosoko ambany ary ny mpanjono madinika ihany no mahazo miditra manokana. "Mipoitra ny fifandirana rehefa miasa ao amin'ny faritra iray ihany ny trawl sy ny mpanjono madinika," hoy i Tom Collinson avy amin'ny Transform Bottom Trawling Coalition. "
Hamaky bebe kokoa: Hanamarika kihon-dalana ve ny taona 2022 amin'ny didy aman-dalàna na ny fandrarana ny trawling ambany? | The Equal Times nataon'i Annick Berger, 25 March 2022
trawling ambany, Manova trondro ambany